Okwu iji zere na ozi ịntanetị | Martech Zone
Mọnde, Febụwarị 13, 2012 Sọnde, Febụwarị 12, 2012 Douglas Karr
Ọ dị m ka ọ ka mma gbasara àgwà email m mgbe m gụsịrị ịhụ infographic a site na Boomerang. Onu ogugu email na-anata ozi 147 kwa ubochi, ma na etinye ego karie 2 na ọkara awa na email kwa ụbọchị. Ọ bụ ezie na m hụrụ email n'anya dị ka onye na-ajụ ase ma anyị na-arụ ọrụ iji jikọta ya dị ka atụmatụ na ndị ahịa anyị niile, ụdị stats ndị a kwesịrị ịtụ gị ụjọ iji gbanwee omume ịre ahịa email gị.
your email na-eweta ahia kwesịrị inye nkewa na usoro ihe omume ka i wee belata nọmba nke ozi ị na-ezipụ na ukwuu nwaa ha them inweta ntụkwasị obi na uche nke ndị debanyere aha gị. Emepe emepe ihe omume izi ozi dị mgbagwoju anya na ihe na-akpalite nwekwara ike nweta site na iji a akụrụngwa ahịa engine.
Kedu ụzọ ọ bụla, ị ga-ezere ịdị na-ehichapụ ozi ọ bụla na ahịhịa… ma ọ bụ nke ka njọ… na folda email junk!
Ihe omuma ihe a sitere Boomerang, Ihe mgbakwunye email maka Gmail. Na Boomerang, ị nwere ike ide ozi email ugbu a ma dezie ya ka eziga ya na akpaghị aka n'oge zuru oke. Naanị dee ozi dịka ị na-ejikarị, wee pịa bọtịnụ Send Mgbe Emechara. Jiri kalịnda nwere aka ma ọ bụ igbe ederede anyị na-aghọta asụsụ dịka "Mọnde na-esote" iji gwa Boomerang mgbe izipu ozi gị. Anyị ga-esi ebe ahụ were ya.
Ọ bụ Ari Herzog
Feb 13, 2012 n’elekere 11:10 nke abali
Ọ bụrụ na ịnata ozi iri na abụọ tụgharịrị gaa ọrụ 12, gịnị ka nke ahụ pụtara n'ezie? Kedu ihe kpatara ị ga-eji rụọ ọrụ na mmemme ndị ọzọ karịa mmemme email ahụ n'onwe ya bụrụ akụkụ nke ozi ịntanetị gị gbasara email?
Feb 13, 2012 n’elekere 11:18 nke abali
Ndewo @ariherzog: disqus! Anyị na-ekerịta ihe ọmụma Boomerang ebe a ma na-ekwu maka ya… ọ bụghị nke anyị. Banyere ọrụ dị na email, ekwenyere m na ha na-anwa ịleba anya na mgbakwunye agbakwunye nke emepụtara maka onye ọrụ ọ bụla mgbe ị na-agụ email. Ozi ịntanetị anyị natara chọrọ ka anyị rụọ ọrụ tupu ịzaghachi. Nke ahụ bụ isi. N'okwu a, enwetara m ihe ndetu gị dị ka email, na-achọ ka m nyochaa infographic ahụ ọzọ wee zaghachi gị. Ọ bụ ezie na nke ahụ abụghị ọrụ centric email, e mepụtara ya n'ihi ozi email ahụ.
Feb 13, 2012 na 1:40 PM
Daalụ maka ịkekọrịta ozi infographic Doug anyị. Lemon.ly nwere ezigbo oge imekorita Boomerang.
Feb 15, 2012 n’elekere 11:12 nke abali
Obi abụọ adịghị ya na igbe ozi email anyị karịrị anyị niile. Ọ bụ ya mere o ji dị mkpa ka ndị ahịa kwụsịchaa mkpọtụ. Mara oge ị ga-eziga na-enye aka. Nwaleenụ ya iji chọpụta ihe oge na-arụpụta kacha mma na-emeghe ọnụego.